यामदास घायल 'सन्तलाल' Archives - Fonij Korea
यामदास घायल ‘सन्तलाल’ म नाम्सानबाट सगरमाथाको चुचुरो चिनाई रहेछु। उ ……… त्यो……. आँखाको केन्द्रले केन्द्रित गर्न गार्हो मान्ने सेतो टाकुरा मेरो देशको सगरमाथा हो। सगरमाथाको कथा सुनेका छौ?? नालापानीमा आधुनिक हतियारहरु खुकुरीसँग हारेको कथा बन्दुकका गोलीहरु ढुुङ्गासामु झुकेको कथा पक्कै सुनेको हुनुपर्छ। नत्र कसरी रह्यो तिम्रो देशमा ‘नेपालका सिस्नु र अरिङ्गाल पनि आफ्नो राष्ट्रियताका लागि दुस्मनसङ्ग सिगौरा खेल्छन् रे’ भन्ने कथन???? हो त्यहाँका मौरीहरु देश गुनगुनाउछन्। त्यहाँका फूलहरु देश मुस्कुराँउछन्। त्यहाँका पहाडहरु देश बोक्छन्। त्यँहाका हिमालहरु सिर ठडाँउछन् र बिस्वमा आफ्नो अस्तित जगाँउछन्। हो तिनै सिर हो सगरमाथा।फुर्सदमा
यामदास घायल 'सन्तलाल' Breaking News, साहित्य Comments are Off
HRD द्धारा सञ्चालित फोक्लिर्फट र डोजर तालिम सम्पन्न, अर्को आइतबारदेखि नयाँ कक्षा सुरु
कोरियन मानव संसाधन विभाग (HRD) द्धारा संचालित सात हप्ते फोक्लिर्फट र डोजर तालिम सम्पन्न भएको छ । मानव संसाधन विभाग (HRD) ले वैदेशिक रोजगारका शिलसिलामा वैदेशिक रोजगार अनुमती प्रणाली (EPS)मार्फत कोरियामा आएका युवाहरूलाई सिपमुलक तालिमहरु दिदै आइरहेका छन्। रोजगारका लागि कोरिया भित्रिएका युवाहरु पछि आफ्नै देशमा फर्केर केही गर्न सकुन् तथा अबैधानिक रूपमा कोरियामा नै बसोबास गर्नेको सँख्या कम गर्ने उद्धेश्यका साथ बेला बेला HRD कोरियाले यसप्रकारको सिपमुलक तालिमहरु दिदै आइराखेका छन् । जसअन्तर्गत कोरिया स्थित ख्वाङ्जु सहरमा अबस्थित 그린직업전문학교 (GREEN VOCATIONAL TRAINING SCHOOL) मा सञ्चालन गरिएको सात हप्ते फोक्लिर्फटफुर्सदमा
यामदास घायल 'सन्तलाल' प्रमुख समाचार No Comments »
उसैको याद दिलाउने यो जुन कहाँको ?
गजल मुटुभित्र मन रुवाउने धुन कहाँको ? उसैको याद दिलाउने यो जुन कहाँको ? आफ्नै आमा नङ्ग्याएर देश भोकै मार्ने नेतारुपी देश खोक्र्याउने घुन कहाँको ? गाइमुत गोरस ठान्ने झुठो समाजमा पानीलाई विष बनाउने खुन कहाँको ? बिधुवा र गरिब नारी बोक्सी बनाउने यो समाजको नियम र कानुन कहाँको ? तबमात्र यो समाजमा इज्जत रहने रे त्यो सम्पती हिरा मोति सुन कहाँको ?
यामदास घायल 'सन्तलाल' साहित्य No Comments »
कथा धेरै समय पछि, लगभग पाँच बर्षको अन्तराल पछि म आफ्नो गाउँ फर्किएँ। सुन्दरताले चकमन्न मेरो गाउँ। जहाँको सुन्दरताको धरातालमा टेकेर मैले मेरा आधा जिन्दगी काटेको थिएँ। तिनै माटोमा मैले सबै मेरा बाल्यकालका दिनहरु रोपेको थिएँ। त्यो भाष्मे पाखा, दाउबारी, डुण्डुप भिर, रातोमाटे डाँडा सबैका माटोहरुमा घस्रदै, चिप्लिदै र मुछिदै बिताएका थिएँ मैले मेरा बाल्यदिनहरु। त्यहाँका माटोहरुमा कति पसिनालाई रोपेर जिबिका चलाएका थिए मेरा पुर्खाहरुले। तिनै सुन्दर मेरा जन्मभुमिमा फर्कदै गर्दा मेरो मनमा छुटै उल्लासले भरिएको थियो। झन त्यो भन्दा बढी त आमाबा र आफ्ना प्राण प्रियालाई भेट्न पाउनेफुर्सदमा
कबिता बुढि रुख, युगौँदेखी उभिएर त्यो आगानमा, आफ्नै अगाडिको बूढो भबनको, कुचिएको मुहार हेरेर, बसन्तहरु काटिरहि, काट्न त कटिन् कयौँ बसन्तहरु, कहिले सानी बच्ची भएर काटिन्, कहिले किशोरी भएर काटिन्, कहिले तरुनी भएर काटिन्, काटिन् कयौँ रुपहरु, कयौँ बसन्तहरुमा कयौँरुप, तर, हिजो मात्र, त्यो बजारको चर्च ढले पछि, बजारका मान्छेहरु, चढेर उकालाहरु, सजाईन् ती बुढी रुख र बूढो भबनलाई, बुढी रुखको, चाउरीएका ती बोक्राहरु फालिए, सुकेका कपालहरु काटिए, झिमिकझिमिक झिम्किने ती, रङ्गिन आँखे बतिहरु जोडिए, र सिङ्गारिए बेहुलिलाई जस्तै, बुढी रुख बुढेसकालको दुलहिमा सजिए, सजाए त्यो बूढो भबनलाई पनि, अनेकौँफुर्सदमा
बगिराछ आँखाबाट, हुँदै पानी पानी
गजल बेच्न मिल्ने भए बेच्थेँ, मनको पिर कहानी। सधै रुन पाउने को छ, म झैँ भाग्यमानी? ईन्द्रेणी झैं झरीसङ्ग, सधै रुझ्नु पर्ने के ल्याएछु घामपानीको, मैले जिन्दगानी। गुलाफको तरेलीमा, थमाएथेँ जिबन टिपिन् गुलाफ सजाई राखिन्, सुकाई जानीजानी। माया भन्नु फूल रैछ, र त टिपि सुकाई फुलबिनाको के काम भो र, मनको फुलदानी। नयन भरी सजाएको, मेरो जिन्दगी त्यो बगिराछ आँखाबाट, हुँदै पानी पानी।
कथा एका देशमा एउटा ठूलो गाउँ थियो। प्रकृतिको सुन्दरताले भरिपुर्ण त्यो गाउँ जहाँका हावाहरुमा सुगन्धित फूलका बास्नाहरुले भरिएका, पानीहरु पहराको यौबनले भरिएका, जहाँका फूलहरु अप्सराका मुहारको प्रतिबिम्बाहरुले भरिएका, जहाँका माटोहरु बुद्धका बानिहरुले भरिएका थिए। मान्छेहरु थिए, देउताका पुनर्जन्म लिएका जस्तै। सुन्दर गाउँ जस्को नाम सुन्दै मान्छेहरु धन्य महसुस गर्थे। सँसार भरी सबै देशहरुमा त्यस गाँउको नाम फैलिएको थियो। सबै देशका मान्छेहरु स्वर्ग भनेर त्यस गाँउमा घुम्न आँउथे। त्यहाँका मान्छेहरु पनि अत्यन्तै मिलानसार थिए। सवैको भलो चाहान्थे। एक अर्कामा मिलेरै बस्दथे। तर तिनिहरु ज्यादै गरिब थिए। खेतीपातिको भरमा जीवन गुजार्थे। तरफुर्सदमा
यामदास घायल 'सन्तलाल' बिचार / अनुभूति No Comments »
कोरियामा क. हतियार
कथा लगभग पाँच महिना पुगेछ। आमाको पाउमा निहुरेर आशिष माग्दा “सधैब हाँसिखुसी रहनु, सहरको रम्झम देखेर जन्मगाँउ र आमालाई नबिर्सनु” आशिष् लिएर बताससङगै उडेका जहाज सङ्गै नया ठाँउमा आईपुगेको। नयाँ ठाउँ, नयाँ मान्छे, नयाँ परिबेश। जसरी आमाको गर्भबाट जन्मेको बालक नयाँ सँसारमा सिँगौरी खेल्दै हुर्कन्छ। त्यसै गरी सिँगौरी खेल्दा खेल्दै बिताएछु पाँच महिना। भौतिक, आर्थिक र प्राबिधिक बिकासले धेरै अघि बढिसकेको ठाउँ। त्यै ठाँउको प्रबेशबाट नै बन्द कोठा भित्र भित्ता र हातेफोनमा चल्ने चित्रहरु हेरेरै पुर्याएछु पाँच महिना। हरेक सनिबार पालोले बिदा बस्छौँ। यो पटकको सनिबार म बसेँ। यो बिदाफुर्सदमा
कथा: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल….. बिस्तारै जहाजले चलमलाउन थाले। साँझको ७:३० बजिसकेको थियो। जहाजको चारैतिरबाट कहिले अङ्ग्रेजी त कहिले कोरियन भाषामा जहाज उड्न लागेको जानकारी दिदैथियो। नेपालको माटो छोड्नु अघि सबैलाई पुन: एक पटक सम्झिएँ। आमाको आसुँमा पीडा थप्न चाहिन र दिदीलाई फोन गरेँ- “दिदी अब जाहाज उड्न लाग्य्यो। आमाको आँखामा सधै खुसी बनेर बस्नु। निदाएका सपनाहरुलाई सधै सङ्गीतले बिउझाई रहनु। आमाको काखलाई कहिलै खाली हुन नदिनु……… मनका कुराहरु ओठले फोनकै माध्यामबाट ब्यक्त गर्दागर्दै जहाज जोड्ले चलमलायो। नेपालको छाती डगमगाएको झैँ डगमगायो। कहिल्यै जहाज नचढेको म। एक पटक त डराएँ, भुकम्पलेफुर्सदमा
नपग्लने गरि मनमा, बसिरह्यौ किन यामु?
गजल जान्छु भन्दा अङ्गालोमा, कसिरह्यौ किन यामु? धेरैबेर आँखाबाट, खसिरह्यौ किन यामु? दोबाटोमा भेट भयो, मनको बाटो हिड्दै गर्दा बटुवालाई पिरतिले, डसिरह्यौ किन यामु? न त मलाई रुपको वास्ता, न त थियो यौवनकै तर पनि ओठमा लाली, धसिरह्यौ किन यामु? हिंड्दा हिंड्दै यो बटुवा, कोसौ टाढा आइपुग्दानी मुटुभित्र याद बनी, पसिरह्यौ किन यामु? सम्झनाको असिनाले, तिम्रो याद पगाल्नेथें नपग्लने गरि मनमा, बसिरह्यौ किन यामु?